FBC - Muummichi ministiraa mana mareetti argamuun gaaffilee dhiyaataniif deebii laatan
Muummichi ministiraa mana mareetti argamuun gaaffilee dhiyaataniif deebii laatan
Finfinnee, Amajjii 4,2009(FBC) – Muummichi Ministiraa obbo Haaylamaariyaam Dassaalany walga'ii idilee Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataa 12ffaarratti argamuun gaaffilee dhiyaataniif deebii laatan.
Haaromsa gadi fageenyaa gaggeeffamaa jiruun hoggantoonni dhaabbilee tumsaa, ADWUI waliin mariirratti hirmaataa turaniiru. Isaanis mootummaa federaalaarraa deeggarsa argataniin naannolee isaaniitti gamaaggama gaggeessaa jiru jedhan obbo Haaylamaariyaam.
Ijaarsi manneenii sababii Ganni seenen xiqqoo qorree ture malee hin dhaabbanne kan jedhan muummichi ministiraa, Baankiin Daldalaa maallaqni liqaan laatu baajata haaraatti walitti qabannaa kan barbaadu waan ta'eef, amma garuu sun waan furamuuf cimee titti fufeera.
Manneen 39,000 Ganna darbe jiraattotaaf dabarfamaniiru. Adeemsi dabarsuusaa garuu yeroo kan fudhatu akka ture ni yaadatama jedhan muummichi ministiraa. Yaata’uutii garuu tajaajilasaa fooddaa tokkoon laachuun, adeemsa yeroo dheeraa fudhachaa ture xiqqeessuun danda’ameeran ibsan onbbo Haaylamaariyaam.
Muummeen ministiraa amma manneen 131,000 ijaarramaa jiru jedhan. Kunis Baankii Daldalaarraa Birrii biiliyoona 16 barbaada. Bulchiinsi magaalaa Finfinneemmoo Birrii biiliyoona 1.5 ramadan ibsaniiru. Bara baajataa kana manneen kuma 30 dabarsuufis hojjetamaa akka jiru muummeen ministiraa obbo Haaylamaariyaam Dassaalany ibsaniiru.
Rakkoo koonistiraakshin indaastiriirra jiru hiikuuf ilaalcharratti hojjechuun waan barbaachisuuf hojjetamaa jira jedhan obbo Haaylamaariyaam. Dandeettii fi ga’umsa gama kanaan jirus ijaaruuf barnoonni biyyattii kanarratti xiyyeeffateeran himan.
Harkifannaa proojaktoota jajjaboorratti gaaffii ka'eef obbo Haaylamaariyaam deebii yammuu laatan, hunda osoo hin taane kan harkifatan akka jiran yaadachiisanii karoora qabameefin alas ta'u dafanii akka xumuraman hojjetamaa jira jedhan.
Proojaktiin jallisii fi bishaan dhugaatii harkifannaan irratti muul'atus, koontiraaktaroota biyya keessatiin kan ijaarraman gaarii deemaa akka jiran hubachuun barbaachisaadha jedhaniiru.
Daandiiwwan ijaarraman karooran deemaa jiru. Buufataaleen xiyyaaraa koontiraaktaroota biyya keessatiin gaggeeffaman karooran dura kan xumuraman jiraatanis, kan harkifatanis akka jiran himaniiru.
Warshaalee sukkaaraa ilaalchisee yaada laataniinis, proojaktoonni 10 erga takka akka eegalaman himan. Isaan ammoo jalqabarra bu'uuraalee misoomaa babal'isuufii mitii; deemsa miilatiifuu rakkoo turan jedhan. Koontiraaktaroonni federaalaa fi naannolees erga takka akka bobba'anii fi amma karaa akka qabatanis himaniiru. Damicharratti qormaata yeroo dheeraan booda muuxannoo fi ga'umsis dhufaa akka jiru yaadachiisaniiru.
Dhaabbileen Hindii kanarratti bobba'an, Tandaahoo dabalatee rakkoon isaanii kanaan wal qabata ture. Koontiraaktaroonni Chaayinaa fi Koorporeeshiniin Injinariingii Sibiilotaa kan qabatan garuu dansaa deemaa jiru jedhameera.
Oomishaalee alatti ergamanirraa galiin karooran qabame akka argamu qonnaan bulaan sanarratti akka xiyyeeffachuun oomishu hojjetamaa jira jedhan obbo Haaylamaariyaam.
Sana caalaa garuu oomisha dheedhii alatti erguurra, bu'aa itti dabalanii galii gaariin akka argamu maanufaakchariingiin akka babal'atu hojjechuun ni barbaachisaan ibsan. Sanaaf ammoo cee'umsi akka barbaachisu eeraniiru.
Reemiitaansiirraa galiin argamu dhawaata 30% dabalaa dhufeera. Rakkoo sharafa alaa furuuf oomishaalee alatti ergamurraa galii argamu dabaluun barbaachisaadha. Dura waan hedduu alatti erginu waan hin qabneef isa amma argachaa jirru kana hin argannu turre. Sanaaf ammoo caalman hojjechuun barbaachisaadha.
Haaromsi gadi fageenyaa guutummaan gaggeeffamaa jiru milkaa'aa akka jiru obbo Haaylamaariyaam deebii mana marichaaf laataniin ibsaniiru. Amma dhimma biyyoolessaa ta'uunis amma sadarkaa gadaanutti gaggeeffamaa jiras jedhaniiru.
Rakkoo balaa tiraafikaarratti gaaffii ka'eef, deebii yammuu laatan muummeen ministiraa, rakkicha bifa waaraa ta'een hiikuuf sochii hawaasaa akka HIV/AIDS irratti hojjetame gaggeessuun ni barbaachisa jedhan.
Rakkoo hoji dhabdummaa dubartootaa fi dargaggootaa hiikuun, ijaarsa sirna demokraasii keessatti hojii jabaa diinagdeerratti hojjetamu ta'ee ilaallamuu qaba jedhaniiru muummeen ministiraa.
Dameewwan hundarratti carraawwan hojii uumaman, duguuganii fayyadamuun hojjechuun akka barbaachisu mootummaan waan hubatuuf, xiyyaffannoon itti adeemaa jira jedhan obbo Haaylamaariyaam.
Oomishti qonna Gannaarraa argamu isa bara darbee, kan yeroo walfakkaataan wal cinaa qabamee yammuu ilaallamu 12% akka dabalu obbo Haaylamaariyaam himaniiru. Oomishti jallisii fi arfaasaa yammuu itti ida'amummoo kan bara darbee ni caala jechuun ni danda'amas jedhaniiru.
Oduuwwan Biroo « Mootummaan federaalaa fi naannoleen paartilee addaddaan osoo bulanii seerri hariiroosaanii murteessu qophaa’e	Nageenya baha Afrikaaf Ityoophiyaan hojjechaa jirti- obbo Haaylamaariyaam »